izifo Oncological babhekwa njengabantu omunye pathologies eyayivame kakhulu njengamanje vremyavo wonke amazwe, futhi ngaphezu kwakho konke - sikhathi emazweni athuthukile. Kodwa izinhlobo kanye namafomu izimila abulalayo wembula omningi, kanti izici banemvelaphi engakaze cacisa ngokugcwele. Kodwa isimila kwamaphaphu futhi ipheshana zokuphefumula, ososayensi bathole ukuthi imbangela enkulu yalesi sifo saziwa ukubhema - ezimweni eziningi sitholakele wamaphaphu abanomdlavuza zinzima ababhemayo.
Ukwelashwa umdlavuza wamaphaphu ngo-Israyeli, esigabeni sokuqala sihilela ukuqaliswa ezihlukahlukene izinqubo, ngesisekelo okuyinto kuvela ezingeni nolokubhujiswa iphaphu, yokuthi yenqubo metastatic, futhi, ngokuvamile inhlalakahle isiguli. Zonke lezi imininingwane wathola kuthiwa ngu-X-ray ukuhlola, tomography ngekhompyutha, nokuningi ulwazi kubhekwa Endoscopy yomoya (bronchoscopy) futhi ngqo nasoketshezini yamaphaphu (thoracoscopy) .Phakathi inqubo uphenyo wezinsimbi ku laboratory sitholakele wamaphaphu uketshezi isampula esithathwayo, futhi ngaphezu neoplasm izicubu (biopsy). umdlavuza wamaphaphu njengoba kutholakale ukuthi une usebenzisa ukuhlolwa ezengeziwe ezifana MRI amasu kanye kuhlanganiswe PET-CT, kodwa ngokuvamile, izinqubo enjalo kwenziwe imithi oyinikiwe Kunconywa izindlela ukuhlolwa ukusebenza.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ekwelapheni yokwelapha umdlavuza wamaphaphu ngayinye nesineke ngamunye ihlanganiswe yohlelo, ngokuvamile ihlanganisa amasu anjengebalazwe ngemisebe, ukuhlinzwa, futhi wamukele amakhemikhali. Kodwa linje mithi ehlangana Uhlelo eyodwa incike izici ngamunye sezifo umzimba bolnogo.Onkologicheskie babhekwa njengabantu omunye pathologies eyayivame kakhulu njengamanje vremyavo wonke amazwe, futhi ngaphezu kwakho konke - sikhathi emazweni athuthukile. Kodwa izinhlobo kanye namafomu izimila abulalayo wembula omningi, kanti izici banemvelaphi engakaze cacisa ngokugcwele. Kodwa isimila kwamaphaphu futhi ipheshana zokuphefumula, ososayensi bathole ukuthi imbangela enkulu yalesi sifo saziwa ukubhema - ezimweni eziningi sitholakele wamaphaphu abanomdlavuza zinzima ababhemayo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ekwelapheni umdlavuza wamaphaphu nganoma yisiphi uhlelo lokwelapha isiguli yenziwa ngabanye futhi ngokuvamile ehlanganisa amasu anjengebalazwe ngemisebe, ukuhlinzwa, futhi wamukele amakhemikhali. Kodwa linje mithi ehlangana uhlelo olulodwa, kuncike izici siqu isiguli. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuhlinzwa wenziwa njengoba yokwelapha eyinhloko kuphela izigaba sokuqala ukuthuthukiswa isimila, kodwa lapho isifo itholwa kakade Usuqhubekile (lesithathu noma lesine), ukukhonza izifundo eziningana, ngelashwa nangemithi kuhlangene ngemisebe futhi waphinde immunotherapy. Immunotherapy nokwelashwa yemvelo neyaziwayo izindlela ezintsha therapy ye wamaphaphu izimila futhi okwamanje asetshenziswa kabanzi, ngoba zibonisa imiphumela emihle kakhulu.
Ukwelashwa umdlavuza wamaphaphu esigabeni samanje khudlwana amathuba yokwelashwa okuphumelelayo nangokuphumelelayo isifo. izindlela ezintsha zokwelashwa kanye nokusebenza pathologies oncological ingafinyelela njengoba ukuqedwa oyinhloko sifo kanye ukuthethelelwa yayo yesikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, eminyakeni yamuva nje, ososayensi emazweni onke imatasa ukuthuthukiswa kwezinhlelo zokwelapha ezintsha kanye nemithi, ngakho kuwufanele isithakazelo izindlela zesimanje sokwelashwa komdlavuza, ezifana nomdlavuza wamaphaphu.
Viniknennya Umdlavuza, isici umdlavuza, Umdlavuza Hypothesis
Isimila izimpawu: kuyini futhi likhulu kangakanani isidingo sokuhlola